Xog: Alshabaab & Alqaacidda oo ka fekeray khaarijinta madaxweynaha Uganda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maamulka Mareykanka ee uu hogaamiyo Madaxweyne, Barack Obama ayaa soo bandhigay dukumiintiyo farabadan oo laga helay gurigii sanadkii 2011 lagu dilay hogaamiyihii Alqaacidda, Usama Bin Laden.
Dukumintiyada lasoo bandhigay oo Mareykanku u tarjumeen English ayaa waxaa ku jiray kuwa muujinaya qaar ka mid ah xiriirradii dhexmaray Bin Laden iyo Amiirkii sanadkii hore la dilay ee Alshabaab, Axmed Cabdo Godane oo loo yaqaanay Sheekh Mukhtaar (Abu Zubeyr).
Maraykanka aya sheegay in waxyaabaha ay ka heleen gurrkigii qasriga ahaa ee lagu dilay hogaamiyaha Alqaacidda ee ku yaallay banaanka caasimadda Pakistan ee Islam Abad ay ka mid ahaayeen qoraallo uu soo diray Hoggaamiyihii Ururka Alshabaab, Sheekh Abu Zubeyr.
Arrimaha ugu muhiimsanaa ee qoraalkaasi Mareykanku uu baahiyey uu xambaarsanaa ayaa waxaa ka mid ahaa ahaa dagaalka Alshabaab kula jiraan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, badbaadinta dadka ku ganacsanayo Suuqa Bakaaraha, saboolnimadda heysata dadka Soomaaliyeed, adeegyadda Garsoorka, dhul-beereedyadda, iyo Iskaashi dhex mara Alsshabaab iyo Alqaacidada Jaziiradda Carbta.
Qoraal Mareykanku sheegay in Amiirkii hore ee Alqaacidda, Usama Bin Laden u diray hoggaamiyihii hore ee Alshabaab Abu Zubeyr ayuu ku sheegay in loo baahan yahay in la helo garsoorayaal caadil ah, si ay u qaadaan dacwadaha dadka u dhaxeeya.
Sida Mareykanku leeyahay, Bin Laden ayaa warqadiisa ku sheegay in Ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay garsoor cadaalad iyo nabad oo keliya. Qoraalka ayaa Alshabaab ugu baaqay inay ciiddanka AMISOM uga tagaan garoonka diyaaradaha iyo waddooyinka, oo aysan ka dagaallamin gudaha Suuqa Bakaaraha, si loo yareeyo khasaaro soo gaara Muslimiinta ku sugan Suuqaas.
Mareykanka oo kasii hadlay qoraalladii Bin Laden u diray Abu Zubeyr, ayaa sheegaya in labada dhinac ka fakereen qorshe lagu khaarijin karo madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni, kaasoo sanadkii 2007 ciidamadii ugu horreeyey ee AMISOM usoo diray Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho.
Qoraalka ayaa lagu xusayn in dilka Museveni dhabarjab ku noqon doonto dagaalka howlgalka AMISOM, maadaama dalkaasi bilaabay howlgalkaas, soona kordhinayey ciidamada ka imaanaya dalkiisa.
Bin Laden oo sida Mareykanku leeyahay ka hadlay xiriirka Alshabaab iyo Wadaada Dariiqooyinka Suufiyada ee Soomaaliya ayaa kula taliyey Alshabaab inay hubiyaan inay u sheegaan iyaga inay sameeyaan waxa u wanaagsan.
Wuxuu Bin Laden tilmaamay ineysan doonaynin inay Culumadda Suufiyadu noqdaan qalab ay caddowga Alshabaab u adeegsadaan arrimo lid ku ah Alshabaab iyo Alqaacida.
Mareykanka ayaa sanadkii 2011 ka warhelay guri uu si qarsoodi ah ugu noolaa Amiirkii hore ee Alqaacidda, Usama Bin Laden, kaasoo u dhashay Sacuudi Carabiya.
Guriga oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa ku yaallay meel yara ka baxsan magaalada Islam Abaad ee caasimadda dalka Pakistan, waxaana Mareykanku halkaas ku dilay Usama Bin Laden.